Wararka - Waa maxay isku xidhka guud
Waxaa jira noocyo badan oo isku-xidhka ah, oo loo qaybin karo:
(1) Isku xirnaanta go'an: Waxaa inta badan loo isticmaalaa meelaha labada fallaadhi looga baahan yahay in ay si adag xuddun u ahaadaan mana jiraan wax barakac ah oo qaraabo ah inta lagu jiro hawlgalka. Qaab dhismeedka guud ahaan waa mid fudud, fudud in la soo saaro, iyo xawaaraha wareegga degdegga ah ee labada fallaadhihi waa isku mid.
(2) Isku-xidhka guuritaanka: Waxaa inta badan loo adeegsadaa meelaha labada fallaadho leeyihiin leexasho ama baro-kicin qaraabo ah inta lagu jiro shaqada. Marka loo eego habka magdhawga barokaca, waxaa loo qaybin karaa isku-xidhka guuritaanka ee adag iyo isku-xidhka la-guuri karo ee laastikada ah.
Tusaale ahaan: Isku xidhka Universal
Isku xidhka Universal waa qayb farsamo oo loo adeegsado in lagu xiro laba fallaadh (wadista usheeda dhexe iyo mashiinka la wado) ee farsamooyin kala duwan kana dhigo kuwo isla meerto ah si ay u gudbiyaan tiirarka. Iyadoo la adeegsanayo astaamaha farsamadeeda, labada fallaadhi isku isleeg kuma jiraan, labada fallaadh ee isku xidhanina si isdaba joog ah ayey isu beddeli karaan marka ay jirto xagal lagu soo daro faasaska dhexdooda, oo mashiinka iyo dhaqaaqa loo gudbin karo si kalsooni leh. Astaamaha ugu weyn ee isku xidhka caalamiga ah ayaa ah in qaabdhismeedkeedu leeyahay awood magdhow xagal ballaaran, qaab dhismeed is haysta iyo waxtarka gudbinta sare. Xagalka lagu daray ee u dhexeeya labada faasas ee isku xidhka guud ee noocyada qaabdhismeed ee kala duwan ayaa ka duwan, guud ahaan inta u dhexeysa 5 ° ~ 45 °. Xawaaraha sare iyo gudbinta awoodda culus, iskuxidhka qaar waxay sidoo kale leeyihiin shaqooyin isdabamarin, yareynta gariirka iyo hagaajinta waxqabadka firfircoon ee usheeda dhexe. Xidhiidhku wuxuu ka kooban yahay laba kala badh, oo siday isugu xigaan ku xidhan mashiinka wadista iyo wiishka la wado. Mashiinnada korantada guud waxay inta badan ku xiran yihiin mashiinnada shaqada iyadoo la adeegsanayo isku-xidhka.
Isku xidhka Universal wuxuu leeyahay noocyo qaabdhismeedyo kala duwan, sida: nooca usheeda dhexe iskutallaabta, nooca qafiska kubbadda, nooca fargeetada kubbadda, nooca kuuskuus, nooca biinanka kubbadda, nooca foosha kubbadda, nooca dunta tuubada kubbadda, saddex nooc pin, saddex nooc fargeeto, saddex kubbad Nooca biinanka, nooca foosha, iwm; Inta badan la isticmaalo waa nooca usheeda dhexe iskutallaabta iyo nooca qafiska kubada.
Xulashada isku xirnaanta guud ahaan waxay tixgelisaa xawaaraha wareega ee usheeda dhexe ee gudbinta loo baahan yahay, cabbirka culeyska, saxnaanta rakibidda labada qaybood ee isku xiraya, xasilloonida wareegga, qiimaha, iwm, waxayna tilmaamaysaa astaamaha noocyo kala duwan isku-xidhka si loo doorto nooca isku-xidhka ku habboon.